November 19, 2020 964
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) समयको ख्याल नगर्दा कामहरु बिग्रने तथा दण्ड तिर्नुपर्ने हुनसक्छ सचेत रहनुहोला । आफन्तलाई बेवास्ता गर्दा परेको बेलामा स:हयोग नहुन सक्छ । पढाइ लेखाइमा समय दिएपनि भनेजस्तो नतिजा ल्याउँन मुस्किल रहेकोछ । सरकारि काम गर्दा होस गर्नु’होला काम बिग्रने तथा अर्को दिन धाउँनु पर्नेछ । माया प्रेममा गर्नेहरुले आजको दिन नजिक नहुँदा नै राम्रो रहनेछ । अन्य काम गर्नुभन्दा आजको दिन दान धर्म तथा मन्दिर’तिरको यात्रा गरी दिन कटाउँनु नै राम्रो रहेकोछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) हतार गर्ने बानिले अनावस्यक बिवादमा फस्ने योग रहेको छ । पढाइ लेखाइमा अरु’भन्दा पछी परेको भान हुनेछ भने काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला काममा बाधा तथा दुख दिनेहरु स:क्रिय हुनेछन् । मान तथा सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ, काम गर्दा ध्यान लिनुहोला । व्यावसाय’मा भने जस्तो आम्दानी नहुने हुनाले दैनिक गुजारा चलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ । आफ्ना कम’जोरिहरु भरसक लुकाउने प्रयास गर्नुहो’ला अरुले आलोचना गर्न सक्छन् ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) पर्यटकिय तथा रमाईलो यात्रा हुनेछ भने भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्ती’को योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायबा’ट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । मायाप्रेम तथा पति पत्नी विचको सम्वन्धमा विश्वास:को वातावरण मज’भुत भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन वित्न तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछी पारी आफू अगाडी बढ्ने समय रहेको छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) सत्रु तथा प्रतिस्प’र्धीहरु आईलाग्ने भ’एपनि अन्तत तपार्ईँको क्षमता देखेर आफै साईड लाग्नेछन् । स्वास्थ्य सम्वन्धी पुराना समस्या’हरु ठिक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्प:र्धीहरुलार्ई किनारा लगाउँदै अगाडी बढ्ने समय रहेकोछ । पुराना ऋणहरु सकाउँदै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । नोक’रिमा प्रवेशको सम्भाव’नालाई नकार्न सकि’ने अवस्था छैन । प्रेम प्रशङगमा एक अर्काविच नजिक हुने तथा रमाउँन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) शिक्षामा गरीएको लगानीबाट भनेजस्तो आम्दानी नहुने तथा बि’द्यार्थी वर्गले चाहेजस्तो सफलता हात लगा’उँन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । भौतिक सम्पती प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिर्य घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । माया प्रेम’मा अविस्वास बढ्ने तथा पति पत्नी बीच एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा समस्या उत्पन्न हुनेछ । खानपा’नमा ध्यान दिनुहोला पेट सम्बन्धि समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) राजनीति तथा समाज’सेवामा जनताको समर्थन पाइने हुनाले राज्यबाट पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टा&एर जानेछ भने कृषी तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । आमा वा अग्रज’को सहयोगले राम्रा काम&हरु गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवारमा आफन्तसँ’गको सम्बन्ध सुदृड भएर जानेछ । पढ्ने लेख्ने काममा मन जाने हुनाले जीवनमा सफल भएको महशुष हुनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) अदालती तथा न्याल’यबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँ’कै पक्षमा हुनेछन् । दाजुभाई तथा आफन्तको सहयोगमा व्यापारमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिएर जानेछ भने जीवन साथी’को सम्बन्ध थप प्रगाड भएर जानेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्रा’को सम्भावना भ’एपनि यात्राका क्रममा ध्यान दिनु जरुरी छ । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्न सकिने तथा नतिजा हात पार्न स’किनेछ ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) आफन्त तथा कुटुम्वसँग व्यावहार गर्दा वा कुनैपनि कामगर्दा साव’धानि अपनाउनु होला कामहरु बिग्रने तथा मनमुटाव पैदा हुनसक्छ । समय मध्ययम रहेकोले परिबन्धमा परिने तथा झै झग’डा हुने अधिक सम्भावना रहेकोछ । माया’प्रेममा अविस्वास बढ्नाले मन खिन्न हुनेछ । पारिवारिक माहोल’मा मिठो मसिनो भोजन गर्ने अवसर जुर्ने भएपनि खान’पानको तालमेल नमिल्दा सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सम&स्या आउनेछ । पढाइ लेखाइमा अल्छि गर्नाले अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) सामा’जिक कामहरु समयमा नै सम्पादन गर्न सकिने हुँदा मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । राजनीति कर्मिले सर्बसाधारणको काम गरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न स’क्नेछन् । पढाइ लेखाइमा उल्ले’ख्य प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा वि’लाशी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने समय रहेकोले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रेममा सामि’प्यता बढेर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन खुसी रहनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या आउने तथा उप’चार खर्च बढेर जानेछ । गलत कामहरु भुलेर पनि नगनु’होला तुरुन्तै दण्ड तथा जरिवाना तिर्नुप’र्नेछ । पढाइ लेखाइमा समय दिएपनि अ’पेक्षित नतिजा ल्याउन मुस्किल रहेकोछ । माया प्रेममा आजको दिन भेट नहुँदा नै राम्रो रहेकोछ भेटमा एक अर्कालाई अविश्वास गर्नाले नचाहादा नचाहादै छुट्टिनु’पर्ने हुनसक्छ । व्यापार व्याव_साय खस्केर जाने ग्रहयोग रहेकोछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) सरकारी तथा पैत्रिक धन सम्पती हात लागी हुने सम्भावना रहेकोछ भने व्यापार व्याव’सायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रो’तहरु बढाउन सकिनेछ । पढाइ लेखा’इमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडी बढ्न स’किनेछ । ईच्छा आकांक्षा तथा मनो_कामना पूरा हुने समय रहेको छ । दाजुभाई तथा आफन्त’बाट भने जस्तो सहयोग हुने हुनाले दैनिकी सहज मार्गमा अगाडी बढ्नेछ । सवारी साधन तथा अन्य सम्पती’हरु लाभ हुने योग रहेकोछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । परिवार तथा आफन्तको साथ पाइने हुनाले काम’गर्न सहयोग पुग्नेछ । नयाँ काम पाउने तथा गरी’रहेको ठाउमा बढुवा हुने योग रहेको छ । समस्याहरुको समाधान गरी आम्दानीका स्रोत हरु बढा’उन सकिनेछ । सत्रु परास्त हुनेछन् भने आफ्नो क्षेत्रमा बर्चस्व कायम राख्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिस’बाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुनेछ ।
Prevघट्यो सुनको मूल्य, नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस्
Nextहिजाे खाते भनेर अप’मान गर्ने-हरू आज स्याबास भन्दै धाप मार्छन….
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस् (58394)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (43657)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (36573)